पीडा गाउँमा, अभियान सहरमा
Wed, Jun 20, 2018 | 03:25:08 NST
16:56 PM (2years ago )
इन्द्रसरा खड्का -
घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार : दिगो विकासका लागि हिंसारहित समाज, भन्ने नाराकासाथ महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आज सकिँदैछ । के यसले सार्थकता पाएको देख्नुहुन्छ तपार्इं ? कति वर्ष भयो यस्तो अभियान सुरु गरेको ? यसबारे भनिरहनु पर्दैन । नारा नारामै सिमित रहेको जस्तो लाग्छ ।
भन्नेहरु भन्लान् नेपालमा राष्ट्रपति महिला, सभामुख महिला मुख्य मुख्य पदमा महिला नै महिला । अब महिलाले अधिकार प्राप्त गरीसके भनेर । तर खोई महिलाले आफ्नो हक अधिकार पाएका झैँ लाग्दैनन् । म त गाउँकी सामान्य छोरीमान्छे । छोरीले राम्रोसँग समाजमा गएर सत्य तथ्यका बारेमा बोल्न नहुने समाजको छोरी, बाहिर गएर कुनै ठाउँमा काम गर्न नहुने समाजको छोरी । छाउभएपछि आठ दिन छाउपडी गोठमा बस्नु पर्ने समाजको छोरी, मलाई के थाह हुन्छ र यस्तो अभियान बारेमा ?
तर पनि म यस्तो समाजमा जन्मेरै ग्रामीण स्तरबाटै समाजलाई केही परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने सोच्न सक्ने भएकी छु । त्यसको लागि हामी युवाले नै केही गर्नु पर्छ भनेर आवाज उठाउन सक्ने, आफूमा क्षमता भएकाले मैले केही बोल्न सक्ने भएकी छु । तर हाम्रै गाउँठाउँका छोरी चेली सेमिनारमा गरिने कुराबाट कोशौँ टाढा छन् । देख्नेका आँखाभन्दा निकै पर।
खुसी पनि लाग्छ कहिले काँहि आफू धन्न बोल्ने सक्ने छु । तर दुःख पनि उत्तिकै लाग्छ म जस्तै हाम्रो दिदीबहिनी अझै बाध्य छन् अन्धकारमा बस्न । छाउभएकै कारण छाउपडी गोठमा बस्नु के उनीहरुका लागि यो महिला हिंसाविरुद्धको अभियानले केही गर्न सक्तैन ? किन ?
हुन त हाम्रो समाजमा, हाम्रो गाउँठाउँमा अन्धविश्वास अझै छ । रुढीवादी परम्परा अझै कायमै छ । तर महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्था पनि त उत्तिकै छन् । किन आखिर यसको अन्त्य हुन सकेको छैन ? यसको बारेमा कसैको ध्यान गएको छ र ?
विकट बस्तीमा उनीहरुको ध्यान कसरी जाओस् । यहाँ सेमिनार गर्न कुनै पाँचतारे होटल छैनन् । जनताको आँखामा छारो फालेर पैसा खानु छ । आफू अघि बढ्नु छ, धनी बन्नु छ यति त हो । जिल्लामा काम गर्ने संघ संस्थाले गरेको काम देखेर र यो अभियान चलिरहेको बेला नै मैले यस्तो कुरा गर्न बाध्य भएको हुँ ।
अछाम जिल्लाको विकट गाविस षेडशादेवी वडा नम्बर ८ मा मेरो घर पर्छ । २०६८ सालमा रेडियो रामारोशन ९२ मेगाहर्जबाट आफ्नो काम सुुरु गरेँ । त्यसपछि मैले अझ राम्ररी थाह पाएँ अछाम जिल्लामा महिलाको अवस्था कस्तो छ भन्ने । अहिले म छिमेकी जिल्ला बैतडीको रेडियो निंगलासैनी ९४ मेगाहर्जमा काम गरिरहेको छु । एक वर्षको अबधिमा मलाई अछामको भन्दा दयनीय स्थिति बैतडीका महिलाको लागिरहेको छ ।
अझ दलित महिला त्यो भित्रै पनि मुक्तहलियाको अवस्था दयनीय पाएको छु । महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै संघसंस्था त बैतडीमा पनि नभएका होइनन् । अनि महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था कति छन् र तिनले के काम गरीरहेका छन् अनि त्यसको प्रभाव महिलामा कत्तिको परीरहेको छ त ?
मेरो बिचारमा जति पनि संघ संस्थाले काम गर्छन् सदरमुकाम केन्द्रित, यातायातका साधन पुगेको ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ । किन यस्तो त ? आखिर हुनेखाने जान्नेबुझ्ने महिला सदरमुकाम र यातायातका साधन पुगेको बजारमा केन्द्रित छन् त्यसैले होला । के महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानले यस्तै महिलाका लागि काम सुरु गरेको हो त ?
मैले सहरी क्षेत्रमा समस्या छैन भनेकी होइन तर गाउँमा अझै समस्या विकराल छ अनि चेतनाको स्तर पनि निकै कम।
नभए किन ग्रामीणस्तरमा अभियान पुग्दैन ? महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला हिंसाविरुद्ध काम गर्दै आएका महिला अधिकारकर्मीसँग पनि यसको जवाफ छैन । आफ्नो कामको सहजता हेर्नु र आएको बजेट पचाउनु नै उनीहरुको काम जस्तो देखिन्छ । उनीहरुलाई थाह छैन महिला कसरी र किन हिंसामा परेका छन् ? अझै बाध्य छन् हाम्रो ग्रामीण महिला दिदी बहिनी आत्मा हत्या गर्न, अझै बाध्य छन् छाउपडी गोठमा बल्ताकृत हुन । अझै छन् दुव्र्यबहार सहन बाध्य । यसको अन्त्यका लागि चाँहि कसले काम गर्ने ? ग्रामीण भेगमा यस्ता घटना बढीरहँदा सदरमुकाम केन्द्रित कार्यक्रम र्यालीजुलुस निकालेर समस्याको समाधान होला त ?
बैतडीको समस्या हेर्दा निकै दर्दनाक छ । आफू हिंसामा पर्दा अदालतमा गएर न्यायसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ । आफ्नै श्रीमान्, सासु, ससुरा, नन्दबाटै एउटा महिला पीडित हुन्छे । मर्नु न बाँच्नुको दोसाधमा आप्नो जीवन गुजारी रहेको अवस्थामा न्याय पाइरहेकी छैनन् भने किन यस्तो अभियान चलाई राख्नु पर्यो त ? ठूला भाषण गर्न कि समाजमा बाहिरी आवरण पोत्न ?
फेरी घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार : दिगो विकासका लागि हिंसा रहित समाज भन्ने नारा राखिएको छ । नारा हेर्दामा कति राम्रो । तर यसको व्यवहारिकता खै ? १६ दिनपछि सकियो त सबै ? घर शान्ती नै विश्व शान्तीको आधार त हो नै । महिला आफ्नै घरबाट पीडित छे, उसले खान पाएकी छैन, लाउन पाएकी छैन, बस्न पाएकी छैन, उसले घरबाट हेला पाएर समाजबाट नै अपहेलित हुनु परेको छ ।
यदि महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलाउने हो भने सहरबजारमा केन्द्रित हैन, जानुस् ग्रामीण स्तरका बस्ती बस्तीमा गएर चेतना फैलाउनु आवश्यक छ । चेतनाको स्तर जहाँ कम छ त्यहाँसम्म अभियानकर्ता पुगेकै छैनन् । जसले बुझेका छन् । जससम्म सहज पहुँच छ त्यहाँ भाषण गरेर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा फुक्नुले पैसा सक्ने मेलो मात्र भएको छ ।
हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान गएको वर्षको जस्तै, यो वर्ष उस्तै, अर्को पटक पनि यस्तै त होला ? नयाँ के त ? महिला जागरुक बनाउने, हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउनका लागि केही फरक सोच्नुपर्ने होइन र ? आफ्नो ठाउँबाट म पनि सहयोग गर्न तयार छु, आउनुहोस् केही नयाँ गरौँ, काम गरौँ, पैसा सक्ने मेलो मात्र छाडौँ । महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गरौँ।